Midowga Yurub oo hanjabaad u diray madaxweyne Farmajo & madaxda dowlad goboleedyada. - Allbanaadir Media
Home Warka Maanta Midowga Yurub oo hanjabaad u diray madaxweyne Farmajo & madaxda dowlad goboleedyada.
Midowga Yurub oo hanjabaad u diray madaxweyne Farmajo & madaxda dowlad goboleedyada.
Allbanaadir Media (MUQDISHO)-Midowga Yurub ayaa war qoraal ah oo uu soo saaray waxa uu hanjabaad culus ugu diray madaxda Soomaalida gaar ahaan xubnaha laga sugayo inay heshiis rasmi ah ka gaaraan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya.
War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska Midowga Midowga Yurub ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadeed ay naftooda ceebeeyaan si ay u matallaan muwaadiniintooda, marka ay danahooda shakhsiyadeed ka hormariyaan danta guud.